Ukuphupha unomatse Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Unomatse yimpuku, efana nengulube yomhlaba, eyeyosapho lomatse. Kuxhomekeke kwingingqi, inokubizwa ngokuba yi-Eichkitten, Eichkater, okanye Katteker. Kumahlathi aseBavaria kude kuthiwe kukho isidalwa esingumxube, esibizwa ngokuba yi-ganter, esidibanisa izilwanyana ezahlukeneyo, kubandakanya nomatse.
Oonomatse banezilwanyana zasehlathini, bahlala emithini, ngakumbi bathanda ukutya amandongomane. Uboya babo babudla ngokuthandwa kakhulu ngabantu abasebenza ngempahla. Kukho izinto ezifunyanwa nguNeolithic ezibonisa ukuba oonomatse badliwa.
Kodwa kuthetha ntoni xa le ntonga incinci ivela ephupheni? Zeziphi iindlela zokutolika ezigcinwe luphawu "squirrel"? Apha ngezantsi ungafumana ukutolika okwahlukileyo kweyona ndawo ixhaphakileyo yamaphupha ophawu "squirrel". Unokufumana yonke into malunga nalo mfanekiso wamaphupha kwisicatshulwa esilandelayo.
1 Uphawu lwephupha «squirrel» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Yintoni ongayenza ngesikwele samaphupha akho?
1.1.1 Ukondla unomatse. Uhlalutyo lwamaphupha
1.1.2 Iphupha lokuphulula unomatse
1.1.3 Ngokubamba i-squirrel ephupheni.
1.1.4 Unomatse ophuphayo uyafa, lusizi olunjani!
1.2 Uphawu lwephupha «uhlaselo lomatse» - nceda!
1.3 Uthetha ntoni umbala wesquirrel ephupheni?
1.3.1 Umatse omhlophe uqhuba iphupha lam
1.3.2 Oonomatse abamnyama, izilwanyana ezinamaphupha anomdla ...
1.4 «Baby squirrel» - umfanekiso omhle ophuphayo
2 Uphawu lwephupha «unomatse» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «squirrel» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «squirrel» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «squirrel» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Yintoni ongayenza ngesikwele samaphupha akho?
Ukondla unomatse. Uhlalutyo lwamaphupha
Ukuba umphuphi uyondla ikati ye-squirrel okanye ikati ye-squirrel ephupheni lakhe, oku kuthathwa njengophawu oluhle ngaphakathi kwengcaciso yephupha. Nabani na obonisa ukuphatha ngononophelo xa ulele kufuneka uqonde ukuba unesisa nakwabanye el mundo ukuvuka. Ngelo xesha linye, umntu ekuthethwa ngaye ubambelele kwindalo yakhe engokwemvelo.
Iphupha lokuphulula unomatse
Ukubamba unomatse esandleni kungabonisa njengomfanekiso wephupha ukuba umphuphi uya kuba nobuchule kwizicwangciso zakhe kwihlabathi elivukayo kwaye ke aphumelele. Ukuba umntu oleleyo ubonwa ephulula unomatse ephupheni lakhe, unokulindela iiyure ezonwabileyo nosapho lwakhe kwiimeko ezininzi. Nangona kunjalo, ukuba uchukumisa umsila wesikwidusi ephupheni, oko kunokubhengeza ukungonwabi.
Ngokubamba i-squirrel ephupheni.
Ukubamba i-squirrel kwinqanaba lephupha kunokuqondwa njengesilumkiso esivela kungabikho zingqondweni. Lowo uleleyo kufuneka ayilawule ngcono indlela aziphethe ngayo, ethi ngamanye amaxesha igqitywe kakhulu yiminqweno yakhe. Ukuba unomatse ubanjiswe ngumgibe, umntu ophuphayo kufuneka alumke ngokwenyani, kuba oko kusongela ingozi yabo. Nangona kunjalo, ngokuziphatha kwakho ngenyameko, uya kuba nakho ukuyibona kwaye uyiphephe ngexesha.
Unomatse ophuphayo uyafa, lusizi olunjani!
Ukuba umntu oleleyo ubulala unomatse ephupheni lakhe, oku kungabonakalisa umnqweno wakhe wokuzikhulula kwiimvakalelo ebezicinezelwe ngaphambili. Ukuba unomatse esele efile uvele ngelixa elele, umphuphi uhlala ejongene notshintsho olunzulu. Olu tshintsho lunokuba nefuthe elinamandla kwimeko yangoku yobomi, ekufuneka umntu olalayo ayamkele kwaye angayiphiki.
Uphawu lwephupha «uhlaselo lomatse» - nceda!
Amaphupha ohlaselo lekati olunomatse angabonisa uloyiko lokwenene lokuphupha malunga nokuthopha okanye ubuqhetseba. Ukongeza, izilwanyana ezinobundlobongela zihlala zibangela iingxaki ngexesha lokulala. Kwiimeko ezininzi, xa unomatse eluma, umntu oleleyo ufumana uthsuphe wengxabano zosapho ezisamxakileyo ebomini bokuvuka.
Uthetha ntoni umbala wesquirrel ephupheni?
Umatse omhlophe uqhuba iphupha lam
Ukuba ubona unomatse omhlophe ngelixa ulele, uhlala kufuneka ujonge ngokungqongqo umhlaba ophaphamileyo. Kuba kunokubakho abantu apha abafuna ukukhohlisa abo bachaphazelekayo, nto leyo eya kubenza umonakalo omkhulu ngaphakathi. Phantsi kweemeko ezithile, iphupha sele lingcatshwe kwaye ngoku iphupha lakho likucela ukuba uziphathe kakuhle ezi ntlungu.
Oonomatse abamnyama, izilwanyana ezinamaphupha anomdla ...
Umatse omnyama njengomfanekiso wephupha unokutsala ingqalelo yomphuphi kwiimpawu zakhe ezimbi. Ngokunokwenzeka, umntu ophuphayo uzikhohlisa ekuvukeni ubomi nabanye abantu okanye azame ukuthatha ithuba labo kwizicwangciso zakhe. Kungenxa yoko le nto le meko yamaphupha ihlala ihamba nesicelo sokujongana nokuziphatha komntu.
«Baby squirrel» - umfanekiso omhle ophuphayo
Rhoqo ngephupha lomntwana unomatse, umntu oleleyo ufumana uphawu lweetalente zakhe zokwenene kunye namandla akhe. Kufuneka ubazi ezi zakhono. Kungenxa yokuba ngoncedo lwamandla akho uya kuba nakho ukwenza izimvo kunye neeprojekthi kwihlabathi lokuvuka kwaye awuzukunyanzela ukuba ubanyanzele.
Uphawu lwephupha «unomatse» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa unomatse ebonakala kwihlabathi lamaphupha, lo mfanekiso uphuphayo uhlala ulumkisa, kuba ufuzisela Ubuqhetseba y ukuthopha. Ngenxa yoko, uphawu lwephupha "squirrel" kufuneka luqondwe ikakhulu njengesilumkiso kubantu abafuna ukusebenzisa kakubi ukuzithemba kokulala. Ke ngoko, amaphupha kufuneka alumke kwihlabathi elivusayo ukuba angakhohliswa ngabahlobo bobuxoki.
Nangona kunjalo, kukwakho nokutolikwa okuhle. Xa unomatse ebonakala elele, utyelelo olumnandi luyabhengezwa. Kananjalo, unomatse unokuba yingcali kumaphupha. impumelelo kwaye kuthetha uvuyo olothusayo. Nangona kunjalo, unomatse ukhumbula iphupha lokuba kufuneka usebenze nzima ukuze uphumelele.
Kwiphupha labantu abangatshatanga, kwezinye iimeko, u-squirrel angabhengeza umtshato owonwabileyo. Ukuba abantu abatshatileyo baphupha i-squirrel, oku kubonisa iingxaki kubantwana okanye i-omen enye. Intsikelelo yomntwana.
Imvisiswano kunye nolonwabo losapho zifanekiselwa kwilizwe lamaphupha ngunomatse ondlayo. Ngaba iphupha linokufuya unomatse? Oku kukwatolikwa njengophawu lokonwaba kosapho.
Umfanekiso wephupha utolikwa gwenxa xa unomatse eleqwa yinja. Kule meko unakho ingxaki yiza nabahlobo. Ukuba iphupha libambe unomatse, liyalumkiswa ngengozi ezayo. Ukulunywa kukanomatse kubonisa umsindo kunye nokuxabana kusapho.
Ukuba unomatse ubonakala kuwe ephupheni ngelixa uqokelela ukutya, uyakukhumbuza ukuba ulungiselele ngexesha lamaxesha amabi.
Uphawu lwephupha «squirrel» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, iskwiza sihlala sibizwa isilumkiso kwabanye abantu abafuna ukonakalisa ubuthongo. Ukuba iphupha lilunywe ngunomatse, umfanekiso wephupha ubhengeza ukuba umntu ufuna ukukuxokisa okanye ukukopela ekuvukeni kobomi.
Nangona kunjalo, ukuba iphupha libulala unomatse kwilizwe lamaphupha, ayisiyonto imbi leyo, njengoko ibonisa ukuba ungababona abahlobo bobuxoki kwaye wohlukane nabo.
Ngokwesiko, unomatse wayehlala engumqondiso ekuchazeni iphupha elo mphuphi ikamva elikhuselekileyo njengokuba uza kudibana nabantu abazokunceda. Nangona kunjalo, kufuneka usoloko ucinga ngokhuseleko, olubonisa unomatse ngokuqokelela ukutya ephupheni.
Uphawu lwephupha «squirrel» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, umnatse ubizwa isilumkiso Ukutolikwa, okhumbuza umphuphi ukuba angaphazanyiswa ngamazwi obuxoki kunye nokuthopha kwindlela yokukhula kwakhe ngokomoya.